Ntụ ntụ mkpuchi slide Manufacturers & Suppliers - China Powder Coating slide Factory
Ihu etiti kabinet spraying ala ugwu onwe emechi drawer slide
Okwu Mmalite:Ihu etiti kabinet spraying ala ugwu onwe emechi drawer slide. Emere ya site na igwe igwe. Nwere ike iji maka American ụdị ihu etiti cabinets.The ibu ike gburugburu 25 KGS na ịgba ígwè karịrị 50,000 ugboro. The mma bụ ala slide na itule pad, ezigbo eji na ala mkpọtụ, onwe-metụtara ọrụ, ụzọ abụọ nke nkwụsị ibe n'ibe iji gbochie slide-esi Ọdịdị. Elu na-eji teknụzụ agba agba agba, enweghị ọgwụ na-egbu egbu na gburugburu ebe obibi, na-egbochi nrụrụ, mgbochi nchara.
Nodị No.: US02A
604 Series European ala arịọnụ onwe nso powder ntekwasa ala slide
Okwu Mmalite:604 Series European ala arịọnụ onwe nso powder ntekwasa ala slide bụ kacha ụdị drawer slide. Emere ya site na igwe igwe. Nwere ike iji maka ụdị ngwa ụlọ niile. Ike ibu dị gburugburu 25 KGS na ịgba ịnyịnya ígwè karịrị oge 50,000. The mma bụ ala slide na itule pad, ezigbo eji na ala mkpọtụ, onwe-metụtara ọrụ, ụzọ abụọ nke nkwụsị ibe n'ibe iji gbochie slide-esi Ọdịdị. Elu na-eji teknụzụ agba agba agba, enweghị ọgwụ na-egbu egbu na gburugburu ebe obibi, na-egbochi nrụrụ, mgbochi nchara.
Nodị No.: YA-01
FGV Series ala ugwu onwe emechi ntụ ntụ mkpuchi South America drawer slides
Okwu Mmalite:FGV Series ala ugwu onwe emechi ntụ ntụ mkpuchi South America drawer slides bụ mfe ụdị drawer slide. Emere ya site na igwe igwe. Nwere ike iji maka ụdị ngwa ụlọ niile. Ike ibu dị gburugburu 25 KGS na ịgba ịnyịnya ígwè karịrị oge 50,000. The mma bụ ala slide na itule pad, ezigbo eji na ala mkpọtụ, onwe-metụtara ọrụ, ụzọ abụọ nke nkwụsị ibe n'ibe iji gbochie slide-esi Ọdịdị. Elu na-eji teknụzụ agba agba agba, enweghị ọgwụ na-egbu egbu na gburugburu ebe obibi, na-egbochi nrụrụ, mgbochi nchara.
Nodị No.: YA-02
86mm Elu drawer n'akụkụ panel slide metal igbe drawer
Okwu Mmalite:86mm Elu drawer n'akụkụ panel slide metal box drawer bụ ụdị kachasị drọwa usoro. Emere ya site na igwe igwe. Nwere ike iji maka ụdị ngwa ụlọ niile. Ike ibu dị gburugburu 25 KGS na ịgba ịnyịnya ígwè karịrị oge 50,000. The mma bụ ala slide na itule pad, ezigbo eji na ala mkpọtụ, onwe-metụtara ọrụ, ụzọ abụọ nke nkwụsị ibe n'ibe iji gbochie slide-esi Ọdịdị. Elu na-eji teknụzụ agba agba agba, enweghị ọgwụ na-egbu egbu na gburugburu ebe obibi, na-egbochi nrụrụ, mgbochi nchara.
Nodị No.: YA-03A86
118mm metal igbe drawer slide (ntụ ntụ ntekwasa ala slide)
Okwu Mmalite:118mm metal igbe drawer slide (powder ntekwasa ala slide) bụ kacha ụdị drawer usoro. Emere ya site na igwe igwe. Nwere ike iji maka ụdị ngwa ụlọ niile. Ike ibu dị gburugburu 25 KGS na ịgba ịnyịnya ígwè karịrị oge 50,000. The mma bụ ala slide na itule pad, ezigbo eji na ala mkpọtụ, onwe-metụtara ọrụ, ụzọ abụọ nke nkwụsị ibe n'ibe iji gbochie slide-esi Ọdịdị. Elu na-eji teknụzụ agba agba agba, enweghị ọgwụ na-egbu egbu na gburugburu ebe obibi, na-egbochi nrụrụ, mgbochi nchara.
Nodị No.: YA-03A118
150mm metal igbe drawer slide
Okwu Mmalite:150mm metal igbe drawer slide bụ ụdị kachasị drọwa usoro. Emere ya site na igwe igwe. Nwere ike iji maka ụdị ngwa ụlọ niile. Ike ibu dị gburugburu 25 KGS na ịgba ịnyịnya ígwè karịrị oge 50,000. The mma bụ ala slide na itule pad, ezigbo eji na ala mkpọtụ, onwe-metụtara ọrụ, ụzọ abụọ nke nkwụsị ibe n'ibe iji gbochie slide-esi Ọdịdị. Elu na-eji teknụzụ agba agba agba, enweghị ọgwụ na-egbu egbu na gburugburu ebe obibi, na-egbochi nrụrụ, mgbochi nchara.
Nodị No.: YA-03A150